रमेश खरेल को’रोना सं’क्रमणका कारण गम्भीर बिरामी आइसियुमा राखेर उपचार !! - खबरदार न्युज
May 27, 2021 May 29, 2021 AdministerLeaveaComment on रमेश खरेल को’रोना सं’क्रमणका कारण गम्भीर बिरामी आइसियुमा राखेर उपचार !!
Koको’रोना सं’क्रमणका कारण गम्भीर बिरामी बनेपछि करिब दुई सातायता नेपाल पुलिस अस्पतालमा उपचाररत पूर्व नायब महानिरीक्षक रमेश खरेलको स्वास्थ्यमा सामान्य सुधार आएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। उनलाई आइसियुमा राखेर उपचार भइरहेको छ।
को को न्यायाधीश रहलान संवैधानिक इजलासमा ? हेर्नुहोस्।